Macalinkii dilaaga ahaa ee Ilkacase oo saaka aroortii Muqdisho lagu toogtey.
Puntlandtimes (Muqdisho)-Maxamed Xaaji Ilkacase oo ahaa macalin Jaamacadeed kaasoo Maxkamadi ku heshay inuu geystey dilal badan isagoo u shaqaynaya Kooxda Alshabaab iyo laba ruux oo kale ayaa saaka dil toogasho ah lagu fuliyey magaalada Muqdisho.
Warbaahinta Dawlada ayaa shaacisay dhacdadan
“Macallinkii dilaaga ahaa dhagar qabe Maxamed Xaaji Ilka case iyo garbihiisii oo kala ahaa Axmed Maxamed Haashim iyo Saalim Siciid Maxamed ee magaalada Muqdisho dadka sida micno darada ah ugu dili jiray ayaa saaka lagu fuliyey cadaaladda iyadoo lagu toogtay fagaaraha dugsiga Booliska ee general Kaahiye.” Ayaa lagu yiri qoraal kooban oo lagu daabacay bogga facebook ee Telefeshinka afka Dawlada ku hadla.
Ilkacase oo horay dil toogasho ah loogu xukumay ayaa dhowr jeer baraha bulshada lagu faafiyey inuu ka baxsaday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, waxaana ay ka soo muuqdeen goobta toogashada Iskuul buluusiya.